China Umzi-mveliso wocingo lwentsimbi kunye nabavelisi |Shengsong
ngocingo lwentsimbi oluvuthelweyo
I-galvanized steel wire lucingo oluguquguqukayo oluye lwadlula inkqubo yeekhemikhali ze-galvanization.I-galvanization ibandakanya ukugquma ucingo lwentsimbi engenasici kunye nentsimbi ekhuselayo, ekhusela umhlwa, efana ne-zinc.Umphezulu wocingo lwentsimbi egudisiweyo, akukho zintanda, amalungu, imisipha, amanxeba kunye nomhlwa, iyunifomu yomaleko wagalvanized, ukunamathela okuqinileyo, ukuxhathisa umhlwa ixesha elide, ukuqina kunye nokunwebeka okuhle kakhulu.Ikwafumaneka kwiigeyiji ezahlukeneyo.
I-1 Material : ucingo oluphantsi lwe-carbon steel
I-2 i-Zinc yokugqoka : 30-200g / m2
3 Amandla okuqina: 300-550Mpa
4 Umlinganiselo wobude : 10% -25%
I-5 MOQ: iitoni ze-5
6 Ukupakisha: ifilimu yeplastiki ngaphakathi kunye ne-hessian / ibhegi yokuluka ngaphandle;njengesicelo somthengi
7 Ixesha lokuhambisa : rhoqo 20days
8 Ixesha lokuhlawula :TT ;L/C
9 Itekhnoloji evelisayo: enomgangatho ophezulu wekhabhoni yentsimbi ephantsi, emva kokuzoba ukubumba, ukuchola i-derusting, ubushushu obuphezulu be-annealing kunye nenkqubo yokupholisa.
Isiqinisekiso se-10: ISO9001
1》 Iingcingo zentsimbi ezifakwe kwidiphu eshushu
I-Zinc Coating: 30g-260g / sq.mm2
Ubomi beShelf: 8-15years, buxhomekeke kwimeko yesicelo.
2》 I-electro galvanized iron wire
I-Zinc Coating: 8g-15g / sq.mm2
Ubomi beshelufu: 3-10 iminyaka, ixhomekeke kwimeko yesicelo.
Uphawu: Iingcingo zethu zentsimbi zithambile kakhulu, zine-elasticity entle kunye nokuguquguquka, iglosi ephezulu yomphezulu kunye ne-anti-corrosion ephezulu.
Isicelo: Iingcingo zentsimbi eziphekiweyo zisetyenziswa ngokubanzi kucingo lolwakhiwo, umsebenzi wezandla, ukwenza umnatha wocingo, intambo yaselwandle, ukupakishwa kwemveliso, ezolimo, ukufuya izilwanyana kunye nezinye iindawo.
I-Electro galvanized iron wire yenziwe ngentsimbi ekhethiweyo ethambileyo, ngokuzoba ucingo, ukugalela iingcingo kunye nezinye iinkqubo.I-Electro galvanized iron wire ineempawu zokugquma kwe-zinc eshinyeneyo, ukuxhathisa okulungileyo kokutya, ukugquma kwe-zinc eqinile, njl.njl. Isetyenziswa ikakhulu kulwakhiwo, ukubiyela indlela ecacileyo, ukubophelela kweentyatyambo kunye nokulukwa kocingo.
IGuage yocingo: BWG5 ~ BWG30
Ucingo Ububanzi: 5.5mm ~ 0.3mm
Amandla okuqina: 300 ~ 500 N/mm2
Izinto eziphathekayo: ucingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi, Q195,SAE1008
2.ifilimu yeplastiki ngaphakathi kunye nelaphu le-hessian / ibhegi ephothiweyo ngaphandle
4.Okunye ukupakisha ngokweemfuno zabathengi.
Ubunzima bekhoyili: 0.1-1000kg/coil, inokwenziwa njengerequirement yabathengi.
iStandard Wire Gauge
Ngaphambili: I-Black Annealed Wire
Okulandelayo: Ubuchwephesha baseTshayina baseTshayina i-Aopro yokutsala iChain Iintlobo zase-UK zotsalo locingo